ပို့စ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု နောက်ခံကာလာ မတူအောင်တင်နည်....နောက်ခံ ပုံထည့်တင်နည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ပို့စ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု နောက်ခံကာလာ မတူအောင်တင်နည်....နောက်ခံ ပုံထည့်တင်နည်း
ပို့စ်နောက်ခံကာလာနဲ့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင် တင်နည်း။
မိမိတို့ဘလော့ပို့စ်မှာ Edit HTML, ကိုကလစ်ပြီးတင်ရပါမယ်...
အဲမှာ HTML ကလစ်တာနဲ့ ကုဒ်လေးကျလာမယ် ဖျက်လိုက်ပါ... အောက်ကပေးထားတဲ့ကုဒ်ကို ကော်ပီယူထည့်ပါ...
သည်နေရာမှာမှ မိမိတို့ရဲ့ ပို့စာသားများကိုထည့်လိုက်ပါ။
အနီရောင်စာသားတွေနေကို မိမိတို့ ပို့စ်ရဲ့ ရှေ့ဆုံးကနေ ထားပေးလိုက်ပါ.
အပြာရောင်နဲ့စာသား </div> ကိုတော့ မိမိတိုပို့စ်ရဲ့ အဆုံးနောက်ကနေ ထည့်ပေးပါ.
အစိမ်းရောင် စာသား #DCC368 ကတော့ ကာလာကုဒ်ပါလိုအပ်သလို ချိန်းနိုင်ပါတယ်.
အနီရောင်နဲ့ အပြာလေးကြားမှာဘဲ မိမိတင်မဲ့ပို့စ်ကိုထားရပါမယ်....
အောက်မှာ ပုံလေးအတိုင်းကြည့်လိုက်ပါ... အဆင်ပြေပါပြီနော်...
ဒါကလဲ အထက်ပါနည်းအတိုင်း ထည့်ရမှာပါ ကုဒ်လေးဘဲ အနည်းငယ်ကွာဟ သွားတာပါ..
အစိမ်းရောင်ပြထားတဲ့ IMAGE-URL-HERE နေရာမှာ မိမိတို့ နှစ်သက်ရာပုံရဲ့ လင့်ကိုထည့်ပေးပါ..
အနီရောင်စာကြောင်းကိုတော့ မိမိပို့စ်ရဲ့ ရှေ့ဆုံးကနေ ထားပါ.
အနီနဲ့အပြာကြားမှာမှ မိမိတို့ရဲ့ ပို့စ်စာသားများကို ထည့်ရမှာပါ
ဒါဆို ပြီးပါပြီနော်... Update (or) publish post ကိုကလစ်ပြီးတင်လိုက်ပါတော့ဗျာ..